﻿ ‘हामी बालबालिकालाई व्यवहारिक ज्ञान दिन्छौं’ : किन्डर पिल्लर प्रि स्कुल
‘हामी बालबालिकालाई व्यवहारिक ज्ञान दिन्छौं’ : किन्डर पिल्लर प्रि स्कुल
२०७२ साल चैत्र महिनामा स्थापना भएको इटहरीस्थित किन्डर पिल्लर आइवि लिग किड्स् इटहरीकै नाम चलेको र अमेरीकन पद्धतीबाट पढाइने शिक्षालय हो । शिक्षक शिक्षिका र कर्मचारी गरेर १२ जनाले अध्यापन गराइरहेको यो स्कुलमा कक्षा १ सम्म पढाइ हुने गरेको छ । यो वर्षदेखि कक्षा २ पनि सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको यस स्कुलकी सञ्चालिका श्रुती शर्मासंग स्कुलको विभिन्न विषयमा न्युजलयकी सरीता भण्डारीले गरेको कुराकानीः
प्रि–स्कुल कस्तो किसिमको स्कुल हो ? यहाँ कसरी पढाइन्छ ?
प्रि–स्कुल भनेको बच्चाको विकाससँग सम्बन्धित स्कुल हो । प्रि–स्कुलमा बच्चाहरुलाई व्यवहारिक शिक्षा दिइन्छ ।
युएसएबाट प्रोफेसर एलेन बुथ चर्च हाम्रो स्कुलको भेन्चर हो । प्रोफेसर एलेन १६ वर्षको उमेरदेखि बालमनोविज्ञानमा प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो । एलेनकाअनुसार बच्चाको जन्म भएको दिनदेखि २ हजार दिन उसकोे जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण दिन हो । यो समयमा हामीले उनीहरुको दिमागलाई जति विकास गर्न सक्यौँ उत्तिनै विकास हुँदै जान्छ । त्यो उमेरसम्म हामीले उनिहरुलाई जति सिकाउन सक्यौँ, जति प्राक्टिकल गराउन सक्यौँ उनिहरुले त्यति नै सिक्दै जान्छन् ।
त्यसैले हामी उनिहरुलाई सबै प्राक्टिकल गराउँछौँ, समाजसँग सम्बन्धित विषयहरु पढाउँछौँ । यसमा समाजिक सेवाहरु पुलिस स्टेसन, हस्पिटल, दमकललगायतका विषयहरुको उनिहरुलाई प्राक्टिकल अभ्यास गराउने छौँ । यदि हाम्रो महिनाको शीर्षक हस्पिटल छ भने हामी उनीहरुलाई हस्पिटल लान्छौं । हस्पिटलमा हामीलाई नर्स र डाक्टरहरुले सहयोग गर्नुहुनेछ ।
त्यस्तै आगलागीको बारेमा सचेत गराउनको लागि हामी उनिहरुलाई दमकल भएको ठाउँमा लगेर त्यसको बारेमा बुझाउने छौँ । आगो लाग्दा फायर फाइटरले हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर उनीहरुलाई सिकाउने गर्छौं ।
त्यसपछि उनीहरुलाई पुलिस स्टेसन लिएर जान्छौँ । त्यहाँ लगेर पुलिसले हामीलाई सुरक्षा दिन्छ भनेर प्राक्टिकल नलेज दिने गर्छौं । कतिपय बच्चाहरु स्कुल आएर पनि बोल्न सिक्छन् । त्यसमा पनि सर्वे गर्दा पहिले बच्चाहरु छिटो बोल्थे अहिले किन बोल्दैनन् भन्ने भयो । त्यसमा के देखियो भन्दा पहिला ठुलो परिवार हुन्थ्यो । उनीहरु दिनभरि परिवारका सदस्यसँग बोलिरहन्थे । तर अहिले अभिभावकहरु काममा जान्छन् । उनीहरुलाई मोबाइल दिएको हुन्छ । उनीहरु मोबाइलमा हेर्ने मात्रै गर्छन । इन्टरनेटमा भिडियो मात्र हेर्छन् । उनीहरु बोल्दैनन् । त्यसले गर्दा उनीहरु ढिलो बोल्न थाल्छन् ।
यो मन्टेश्वरीको विशेषताहरु के के छन् ?
हामीले बच्चालाई रटाएर भन्दा पनि प्राक्टिकल गराएर सिकाउँछौँ । उसको दिमगलाई कसरी वृद्धि हुन्छ, हामी त्यो अनुसारको क्रियाकलाप उसलाई गराउछौँ । त्यस्तै अन्य विशेषताहरुमा यहाँ स्वच्छ वातावरण रहेको छ । कोठा भित्र फर्म लगाइएको छ, यदि बच्चा लड्यो भने पनि उसलाई चोट लाग्दैन । बाथरुमहरु पनि बच्चको लागि कम उचाइको रहेको छ । किचन पनि स्वच्छ छ, एकदमै हेल्दि खाना बनाउछौँ । आफ्नै यातायात छ । अब आउने वर्षदेखि हामीले फ्रेन्च ल्याङग्वेज क्लास, कराँते क्लास, आर्ट क्लास र डे केयर पनि सञ्चालन गर्न लागिरहेका छौँ ।
यो स्कुल स्थापनाको लागि इटहरी नै किन रोज्नु भयो ?
यहाँका मेरा केहि साथीहरुले भन्नुभयो कि यहाँ मन्टेश्वरी त धेरै छन् तर पढाई त्यति व्यवस्थित छैन । त्यसैले यहाँ तपाईको इन्टरनेश्नल ब्राण्ड आयो भने हामीलाई पनि राम्रो हुन्छ भन्नु भयो । त्यसपछि मैले आफूले पनि केहि गर्नु थियो ।
मलाई मेरो आफ्नो पहिचान बनाउनु थियो । मन्टेश्वरीको स्थापना गरेँ । सुरुमा तीन जना बच्चा भर्ना भए र त्यो क्रम बढ्दै पहिलो वर्षमा १५ जना बच्चा भर्ना भए । र त्यो क्रम बढ्दै अहिले ४५ जना पुगेको छ । आउने दिनहरुमा यो क्रम अझ बढ्छ भन्ने अपेक्षा राखेकी छु ।
मन्टेश्वरीमा पढाउने शिक्षक विशेष तालिम प्राप्त हुनुपर्छ । यो स्कुलमा पढाउने शिक्षकको योग्यता कस्तो छ ?
हामीले पनि तालिम प्राप्त शिक्षक लिएका छौँ । तर यो लेभलमा तालिम प्राप्त शिक्षक भन्दा पनि अलिकति माया भएको शिक्षक चाहिन्छ । जसले बच्चाहरुलाई माया गरेर राख्न सकोस र अलिक अग्रेजी भाषा पनि राम्रो हुनुपर्छ ।
अहिले इटहरी लगायतका सहरहरुमा मन्टेश्वरी तथा प्रि–स्कुल खोल्ने होडबाजी चलिरहेको छ । शिक्षालाई व्यापारीक पेशाको रुपमा त लिइएको छैन नि ?
अरुले के गर्छन् त्यो त मलाई थाहा छैन । तर मैले यो पेशालाई व्यापारीक पेशाको रुपमा भने लिएको छैन । कुनै पनि काम नाफाको लागि नै गरिन्छ तर त्यो नाफा सुहाउने नाफा हुनुपर्यो । मैले पैसा भन्दा पनि बच्चाहरुका लागि केही गरौँ भनेर नै यो मन्टेश्वरीको स्थापना गरेकी हुँ ।
तपाईको विचारमा नेपालमा शिक्षाको अवस्था कस्तो छ ?
शिक्षाको अवस्था राम्रो छ तर हाम्रो देशमा राजनीतिक अवस्था अलिकति अस्थिर रहेको छ । प्रदेश भएपछि अहिले स्कुलको छुट्टिले निकै गाह्रो बनाएको छ । किनभने एउटा छुट्टि राज्य सरकारले छैन भन्छ तर प्रदेश सरकारले दिइरहेको हुन्छ । त्यो मिलाउन पनि गाह्रो हुन्छ । हाम्रो शिक्षाको अवस्था राम्रो छ तर अलिकति घोकाइ र रटाइतिर धकेलिएको छ । म स्कुलहरुलाई पनि बच्चाहरुलाई धेरै किताबको लोड नदिनुहोस भन्न चाहन्छु ।
अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने स्कुल पढाइमा लगाएको पैसा लगानी हो खर्च होइन । बाहिरको हल्लामा नजाऔँ कोहिपनि, आफ्नो नानीको लागि स्कुल खोज्दै हुनुहुन्छ भने एकचोटी हाम्रो स्कुल पनि भिजिट गर्नुहोस, चित्त बुझ्यो भने नानी राख्नुहोस् भन्न चाहन्छु ।